Pamusoro - Misidhari
Misidhari inopa dhatabhesi yakakosha uye mishumo yekutsvagisa kune vazhinji vekunze vanounza mota uye inopa yakazvimirira mazano ezvebhizinesi sarudzo.Neruzivo rwakakura rweindasitiri uye kunzwisisa kwakadzama kweChinese bhizinesi tsika, isu takabudirira kubatsira vatengi vedu mukutanga nekuchengetedza kudyidzana neChinese mhando.
Isu tinopawo imwe-yekumira mhinduro dzezvikamu zvemotokari uye zvigadzirwa zvine hukama, zvinosanganisira kupinza uye kutumira kunze bhizinesi uye sevhisi yemumiriri.Misidhari inoshandisa zvakanyanya ISO 9001 quality management system.Iine yakazara sourcing process uye yakatanhamara yekubatanidza musika kugona, isu tinogona kukubatsira iwe kuhwina musika wekugovanisa nemhando yakanaka yechigadzirwa uye mutengo unokwikwidza.
Misidhari inoteedzera tsika yekambani yekutendeseka uye kutendeseka, uye inoramba ichigadzira kukosha kune vatengi, kuitira kuti iwane kusimudzira kwakasimba kwebhizinesi re "Win-Win-Win".
√VIVN Korean Mota Brand Kutanga
√Cedars Tensioners / Idlers
√Alibaba 10-Yemakore-Yekutanga Goridhe Supplier
√Kudyidzana naRoland Berger
√Kutangwa kweCEDARS Brand Spare Parts
√Kudyidzana nePort yeBarcelona & CEIBS
√Kutsvaga kweLeaf Spring
√China Agent Bhizinesi
√Kutsvaga kune 40+ Nyika
√Auto Zvikamu Sourcing Service
Unogona kupinda"CN13/30693” kutarisa kushanda kwewebsite yeSGS
VICE DIRECTOR, KUTENGA
Misidhari yakavambwa ine chiono uye chinangwa chekuratidza kuti bhizinesi rinogona kuitwa zvinobudirira, nekuvimbika uye nekuvimbika kune wese munhu.
Hukama neVatengesi uye Vatengi
Misidhari ichaita zvakanaka uye yakatendeseka kune vese vatengi nevatengesi, neruremekedzo uye nekuvimbika, maererano nechibvumirano chakaitwa navo.
Misidhari ichakudza zvese zvibvumirano zvakasainwa zvakaitwa pakati pedu nevatengi vedu / vatengesi, uye isu hatizotyora chero chibvumirano chechero chibvumirano.
Maitiro eBhizinesi reVashandi
Isu, sevashandi veCedars, tichazvibata pachedu nehunyanzvi uye zvakakodzera nguva dzese muzviitiko zvese zvine chekuita nekambani.
Cedarswill haibvumire vashandi vayo kuti vabatanidzwe mune chero strip kirabhu chiitiko muzita remisidhari.
Tichagara tichizvibata zvinoenderana nemitemo yenzvimbo.
Misidhari inotenda mukati, uye inokudza, yemahara uye yakasununguka makwikwi ebhizinesi.Misidhari inokwikwidzana nesimba, asi netsika, uye zviri pamutemo.
Misidhari haingarevi nhema kune vatengi vayo, vakwikwidzi kana chero ani zvake.
Misidhari haizotauri zvenhema pamusoro pezvigadzirwa kana masevhisi emukwikwidzi.
Misidhari haizozvibatanidzi mukuita chiokomuhomwe mune chero ipi zvayo yebhizimisi redu.
Misidhari haizopi muripo wemari (kana kuti yakaenzana nayo) kuti igadzirise hana yomumwe munhu pamusoro pechisarudzo chehurumende kana kuti chisarudzo chokutenga chokutengesa.
Misidhari inogona kubata vatengi vayo kune chikafu uye varaidzo kana kupa chipo chidiki kuita kuti hukama huve hushamwari, asi kwete kusvika pamwero ungakanganisa kutonga kwechinangwa kana hana.
Misidhari ichaita zvakanakira vadyidzani vayo vebhizinesi uye vagovani vayo.
Misidhari ichaita bhizinesi rayo mukuteerana netsika dzese dzinoshanda, uye kupinza uye kutumira kunze kutonga.
Auto Parts Sourcing, Auto Zvikamu ZveKia, Zvikamu zveMota yeHyundai, Ford Transit Zvikamu Zviri Kutengeswa, Shock Absorber Mota, Chery Qq Zvikamu,